kosha OFX South America Evolution FSX & P3D
1 gore 10 ago #559 by Ace9
Zvaakanga akabhadhara Jumbo muripo kukopa "OFX South America Evolution FSX & P3D" Ndiri kunetseka nei wangu Antivirus ari kunhonga utachiona wakangwarira uye kwete nokundibvumira kuvhura exe faira.
Avast anoshuma Win32: Evo-SC
Munhu kuziva kana yawo utachiona chaiye?
1 gore 10 ago #560 by Gh0stRider203
Rog, zviri avast kuva vaGiriyedhi * ck. Ndicho chikonzero ndakarega kushandisa. positives zvenhema zvakawanda. Ndakagara kushandiswa rikoooo kwenguva yakati uye haana yakawanikwa imwe utachiwana.
uri zvakanaka kuenda Hapana kunetseka pamusoro
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Ace9
1 gore 10 ago #562 by Dariussssss
okuzvidzivirira venhema kwose elnaz ...
1 gore 10 ago #566 by Ace9
Ini ndakagadza uye akaenda Stanley (Falklands) raiva zvakafanana FTX Base girl, ini aitarisa config uye OFX South America ari pamusoro kukosha mazita chete Ushuaia Airport pamusoro payo. Ndiri chinoshayikwa pamusoro uye pamusoro exe installer muitiro, zvakadai somunhu OFX config ezvinhu pane chinhu?